Kenya oo so bandhigtay Liiska Rag alsabaab ku biiray – Radio Daljir
Abriil 19, 2018 10:39 b 0
Dowladda Kenya ayaa shacaisay magacyada saddex Qof oo Kenyaan ah kuwaas oo ay sheegeen in ay ku biireen AL-shabaab.
Booliska Kenya ayaa soo bandhigay magacyada saddexda qof oo ay sheegeen in ay baadi goobayaan islamarkaana abaalgud siinayaan cidda soo sheegta xogtooda.
Madaxa xiriirka Booliska Kenya Charles Wahong,ayaa sheegay in saddexda Nin ay ka baxeen Gobolka lagu magacaabo Milindi,kuna biiray Al-shabaab.
Magacyadooda ayuu ku kala sheegay Mohamed Abdalla Asman , Hamis Hemed , Baloteli iyo Ali Ahmed Ali,kuwaas oo uu sheegay in sohdinta Somaliya ay ka gudbiyeen xubno ka mid ah Al-shabab oo ku sugan Gobolka.
Cabdalla ayuu sheegay in October 2013kii la xiray isaga oo doonayay in uu ku biro AL-shabaab,hayeeshee mardambe oo la sii daayay uu ka faa’deystay in dib ugu laabto
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha Masar oo kulan yeeshay